Naya course » संस्थापक भएकाले संघको अध्यक्ष भएर व्यवसायीको सेवा गर्ने चाहना छ : बिष्णु प्रसाद खनाल संस्थापक भएकाले संघको अध्यक्ष भएर व्यवसायीको सेवा गर्ने चाहना छ : बिष्णु प्रसाद खनाल – Naya course
संस्थापक भएकाले संघको अध्यक्ष भएर व्यवसायीको सेवा गर्ने चाहना छ : बिष्णु प्रसाद खनाल
बाँकेको कोहलपुर पछिल्लो समय जुर्मुराएको छ । महिनौंदिनसम्म कोरोनाका कारण थलिएको कोहलपुरमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । चुनावी सरगर्मीको एउटा कारण हुन बिष्णु प्रसाद खनाल । खनाल कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको संस्थापक सदस्य हुन । खनाल सहित कर्ण बहादर थापा, शेषकान्त शर्मा, नम प्रसाद शर्मा, रामचन्द्र मरासिनी, शुभाष बिष्ट, गणेश कोईराला, गोपाल लम्साल, कृण्ण नहर्की, रेशम सापकोटा लगायतले २०५४ सालमा व्यवसायीको हितका लागि कोहलपुर व्यपार संघको अवधारण अघि सारेका थिए ।
त्यस्तै कोहलपुरमा सडकमा बत्ती छैनन्, आवश्यकता अनुसार सडक बत्ती राख्ने, कोरोनावाट धरासायी बनेका ब्यवसायीहरुका लागि प्याकेज ल्याउने, कोहलपुरको मुख्य आकर्षक न्युरोडमा रेलिगं राखेर बत्ती जडान गर्ने, एनटिभी सम्मको वाटोमा मिनिपार्क बनाउने उनको योजना छ । मिनिपार्कमा वाणीज्य संघको लगानी रहेनेछ भने त्यसको नाम पनि उनले सोचिसकेका छन् । उनले भने, ‘त्यसको नाम नै वाणीज्य पार्क रहने छ ।’ त्यसवाहेक ब्यववसायी उत्पादन गर्न नाम तालिम दिने र आवश्यकता अनुसारको कामलाई निरन्तरता दिने उनको उद्देश्य हुनेछ । उनै खनालसँग निर्वाचन सन्दर्भमा हामीले केही कुरा गरेका छन ।
१० तपाईको उम्मेद्धारी अध्यक्ष पदमा नै किन ?
२ तपाईको टिमको व्यवसायीक एजेण्डा के के हुन ?
पछिल्लो समय संघ व्यवसायीकको हितमा खरो उत्रन नसक्दा अहिले व्यवसायीहरु संघको भुमिका प्रति नै नकारात्मक छन । आफु सदस्य रहेको संघको सदस्यता नविकरण गर्न पनि चासो नदेखाउने अवस्थामा हामी पुगेका छौ । यस्तो किन भयो, यो बारे हाम्रो टिमले गहन अध्यन गर्नेछ । व्यवसायीको हित अनुकुल अगाडी बढने छौ । हामी माझ व्यवसायीका एजेण्डाहरु अनगिन्ती छन, हामीले उठाएका एजेण्डा भनेको बाणिज्य संघलाई व्यवसायी मैत्री बनाउनु पर्छ भन्ने नै हो ।
भारतिय सिमा बाजरका कारण पिल्सीएका कोहलपुर बजारका व्यवसायीको हितका लागि उपभोक्त शिक्षा मार्फत स्वदेश बस्तु र उत्पादन बारे प्रबद्धन गर्ने, कर शिक्षा बारे बाणिज्य संघले नियमीत हेल्प डेस्क चलाउने, कोरोना काहरका कारण धारासायी भएको सबैखाले व्यवसायलाई संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने, घरबेटी र व्यवसायी बिच देखिने घरबाहाल समस्या समाधानका लागि नितिगत व्यवस्था गर्ने, फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने साना व्यवसायीलाई उचित स्थानमा बजार व्यवस्थापन गर्ने, बैजनाथमा निर्माण हुन लागेको औधोगिक क्षेत्र छिटो निर्माणका लागी पहल गर्ने र कोहलपुर क्षेत्रमा उद्योग स्थापना र संचालनमा प्रोत्साहन, समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरि यस क्षेत्रमा रहेका साना लघु उद्यम तथा ठुला उद्योगहरुको बिकाश, बिस्तार र संरक्षण गदै नयाँ उद्योग स्थपनामा जोड दिने र सोका लागि अवश्यक पहल गर्ने र कोहलपुरलाई औधोगिक ग्रामको रुपमा बिकास गदै लघु तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना छ ।
३. खास गरि कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको सुदृढिकरणमा तपाईको योजना के छ ?
पछिल्लो समय व्यवसायीले संघको सदस्यता नबिकरणमा चासो नदिने गरेको पाईएको छ । वाणिज्य संघको सदस्य किन बन्ने भन्ने गरेको पनि सुन्नमा आएको छ । हामिले संस्थालाई व्यवसायी हित अनुकुलको बनाएर व्यवसाय सुरु गर्ने बित्तिकै संघको सदस्य बन्ने र हरेक आर्थिक वर्षमा नविकरण गर्ने बातावरण हाम्रो कार्यकाल बाट सुरु गर्ने गाउने प्रतिबद्धता गर्दछु । संघ व्यवसायीको भावना विपरीत जादैन भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौ । निर्वाचनका बेला बिभिन्न खाले प्रतिबद्धता गर्ने र नेतृत्वमा पुगेपछि व्यवसायीको भावना विपरीत चल्ले भन्ने व्यवसयाीको गुनासो छ । त्यो गुनासो कुनै पनि हालतमा आउन दिदैनौ ।
४ं तपाईलाई कोहलपुरका व्यवसयाीले किन जिताउने ?
५ं.कोहलपुरको समग्र बिकासकालागि तपाईको कस्तो भुमिका रहन्छ ?
हामी कोहलपुरलाई औद्योेगिक ग्रामका रुपमा बिकास गर्न, व्यवसायीक सुरक्षा र संरक्षण हुने स्थलको रुपमा बिकास गर्न र समाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसायीक क्षेत्र निर्माण गर्ने अभियानमा छौ । उद्योग वाणिज्य क्षेत्र मात्रै होईन समाजिक क्षेत्रमा म र मेरो समुह उत्तिकै सक्रिय क्रियाशील छ । कोरोना महामारीका समयमा सम्पुर्ण मानिस घर भित्र बस्ता म र मेरो टिमले पैदल यात्रीलाई खाना खुवाउने र सार्वजनिक स्थानलाई सेनेटाईज गर्ने अभियान चलाएका थियौ । रोजगार गुमाएका थुप्रै बिपन्नलाई दाल चामल बितरण गर्यौ । त्यस अर्थमा हामी व्यवसयाीक क्षेत्र र समाजिक क्षेत्रका उत्रिकै क्रियासील रहने छौ ।
६. अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई व्यवसायी मैत्रि बनाउका लागि हामी हाम्रो समुह प्यानलबाट चुनावी मैदानमा छौ । दुई प्यानल बनाएर चुनावमा होमिएको भएपनि निर्वाचित भईसके पछि सम्पुर्ण व्यवसायीको भावना र मर्म अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । सबै खाले व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीको यस टिमलाई अमुल्य मत दिएर अत्याधिक मतका साथ बिजयी गराउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । खास गरी कोहलपुरको उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रको सम्वद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्नका लागि हाम्रो टिमको जित अनिवार्य छ । हामि साँच्चै केहि फरक गर्ने सोचका साथ चुनावी मैदनमा छौ । तपाईको मायाको खाँचो छ । हामी कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई वास्तवमै व्यवसायी मैत्री बनाएरै छाड्ने छौ ।